တရုတ်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများက ဖော်ထုတ်ပြသပေးခဲ့သော “Big/Xiaoji” အစီအစဉ်တွင် လုပ်ငန်းခွင်သုံး ချည်မျှင်များ - Pandaily
Categories: Culture ကိုPandaily ဇူလိုင် 16, 2021 ဇူလိုင် 16, 2021 မှာ Posted
တရုတ်လုပ်သားသန်းပေါင်းများစွာဟာ ဆိုက်ဘာ၊ အချိန်ပို၊ အချိန်ပို အလုပ်ချိန်တွေ မလုပ်ကြသေးတာကြောင့် အဆုံးမသတ်နိုင်ဘဲ ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အင္တာနက္စနစ္ ထြန္းကားလာသည္ႏွင့္အမွ် ယင္းျပႆနာသည္ ေပၚေပါက္ခဲ့ ေသာ အခ်ိန္ပုိဆင္းခုိင္းသည့္ အခ်ိန္ပုိဆင္းခုိင္းသည့္ အခ်ိန္ပုိဆင္းခုိင္းျခင္းႏွင့္ တရား၀င္ပိတ္သိမ္း ျခင္းတုိ႔တြင္ အပူတျပင္း ေမး ျမန္းမႈမ်ား ျဖစ္လာၿပီး အင္တာနက္တြင္ ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ျဖစ္ေပၚလာ သည္။
နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ “966 Culture ” အပြင်- တစ်ပတ်ကို ခြောက်ရက်၊ မနက် ၉းဝဝ နာရီကနေ ည ၉းဝဝ နာရီအထိ- တချို့လူမသိ သူမသိ ဒါမှမဟုတ် လူမသိ လူမသိ ဖြစ်နေတတ်တဲ့ အလုပ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အစီအစဉ်တွေကို ဥပမာ-“Big/Week ” အစီအစဉ်နဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို တစ်ပတ်ကို ခြောက်ရက်နှုန်းနဲ့ အလုပ်ဆင်းခိုင်းပါတယ်။ ဒီအစီအစဥ္ဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံက နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးေတြရဲ႕ လိုလားခ်က္ျဖစ္တဲ့ Share Application ျဖစ္တဲ့ Sound Share Application ကို တီထြင္သူ ဘိုက္ဘိုက္က တရုတ္အြန္လိုင္းကေန ရိုက္နွက္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းေနထိုင္မႈ ဝန္ေဆာင္မွု ပလက္ေဖာင္းေတြေအာက္မွာ အေမရိကန္ လူမႈမီဒီယာပလက္ ေဖာင္းေတြ၊ အေၾကာင္းအရာေတြကို အလ်င္အျမန္မွ်ေဝခဲ့ပါတယ္။
မရှိတော့ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီး ဘိုက်ဟောက်စ်နဲ့ အမေရိကန်အဖွဲ့တွေဟာ သည်လုပ်ရပ်ကို စွန့်လွှတ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး သည်မူဝါဒဟာ “Big/Xiaoy” ရဲ့ အဓိကအသွင်ကူးပြောင်းရေးအစီအစဉ်တစ်ခုပဲလို့ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ မရှင်းမလင်းဖြစ်နေပေမယ့် အခြားနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေက အရွယ်အစား မခွဲခြားဘဲ လိုက်နာရမယ့် အလေ့အထတွေ ရှိနေပေမယ့် သိသာထင်ရှားတာက နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာ နောက်ဆုံးမှာ သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အလေ့အထတွေကို ပြောင်းလဲသွားစေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သတင်းတွေထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ Reaction ရောထွေးနေပါတယ်။ ဒီလို အစပျိုးမှုမျိုးကို ပညာရှင်တွေနဲ့ အပြင်လူတွေကလည်း ကြိုဆိုကြတဲ့အတွက် အခုလို စနစ်သစ်တခုကို ယုံကြည်ကြတဲ့အတွက် ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ ကျန်းမာ သန်စွမ်းမှုကို ပိုမို ကောင်းမွန်စေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နာကျင်မှု လျော့နည်းအောင် လေ့ကျင့်ပေးနေပါတယ်။
Topics: မြင်ကွင်းတရုတ်အင်တာနက်ကုမ္ပဏီကြီးများက အချိန်ပိုယဉ်ကျေးမှုကို ပြောင်းလဲရန် ဆန္ဒရှိနေဟု ဝန်ထမ်းများတုံ့ပြန်
Duong University ရဲ့ Oriental Management Institute က ဒါရိုက်တာ Suk Yong က “ကောင်းတဲ့အပြောင်းအလဲလို့ ထင်တာပဲလေ၊ တခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ဖို့များတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
ပါမောက္ခ ဒေါ်စုကလည်း အင်တာဗျူးတခုမှာ “Big/Little Week ” အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တာဟာ အခြေခံ အကြောင်းတရားတခု၊ အလုပ်သမား စည်းမျဉ်းတွေ ပိုမိုတင်းကျပ်လာမှုနဲ့ အတူ နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ကြီးကြပ်မှု အားကောင်းလာမှုကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အစိုးရတရပ် ဖြစ်နေပါပြီ။ “ ဒီထဲမှာ နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးက ဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးရဲ့ ဖိအားပေးမှုအောက်မှာ ဒီလုပ်နည်းလုပ်ဟန်ကို ပယ်ဖျက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်” လို့ ဝိုင်းစုက ပြောပါတယ်။
“996 Culture ” နှင့် ပတ်သက်၍ “Big/Little Week ” ဟု အင်တာနက်လုပ်ငန်းတွင် ခေတ်စားလာနိုင်သည့် အကြောင်းရင်းကို ပါမောက္ခ ဒေါ်စုစုက ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးနောက် အင်တာနက် လုပ်ငန်းအတွင်း ဖိအားများ ကြီးမားလွန်းပြီး ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်လာမည်ကို စိုးရိမ်မိကြောင်း အင်တာနက်ကုမ္ပဏီများက ဆိုသည်။ “ သူတို့ထင်သလောက်တော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတူတူပဲလုပ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ စီးပွားရေးစိတ်ဓာတ်ကင်းမဲ့သလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ဟာ နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေကို အပြန်အလှန်မျှော်လင့်ပြီး အခုလိုမျိုး အစီအစဉ်တွေလုပ်ဖို့ သဘောတူလိုက်ကြပါတယ်” ဟု ဒေါ်စုစုက ဆက်ပြောသည်။
လက်နဲ့ဘိုက်ရိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းက “တခုလုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ လက်နဲ့တွဲ၊ တွဲ၊ တွဲ၊ တွဲ၊ တွဲ” ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ် အတိုကောက်ပါပဲ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ တရုတ်ပြည် တွင်းထုတ် Edition TikTok ဟာ တုန်တုန် အသံထွက် မြန်တဲ့ သုံးစွဲသူ သန်း ၁၀၀ ကို အလားတူရိုက်နှက်မှု ပြုလုပ်ခဲ့သလိုမျိုး ဘိုက်ဘိုက်ကို အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်တိုအတွင်း တုန်လှုပ်နေတဲ့ အသံထက် အသုံးပြုသူအရေအတွက်က ပိုမြန်တယ်လို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Suwha နဲ့ Cheng တို့က ဝေဖန်ကြပြီး အတွင်းရေးစာတစ်စောင်ကို ထုတ်ပြန်ပြီး ကုမ္ပဏီရဲ့ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ အလုပ်တွဲအပေါ် သဘောထားခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး ကုမ္ပဏီတွေက လုပ်ရည်ကိုင်ရည်နဲ့ အရှိန်ယူပြီးတော့ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်အဖြစ် လုပ်ကိုင်လာကြတယ်။ ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ် အချိန်အတော်ကြာအောင် ရိုက်နှက်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့် “Big/Little Week ” ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ အလားတူနည်းလမ်းတွေ ချမှတ်ဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလကနေ စတင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ရိုက်နှက်မှု (ByteDance) နှင့် Flexing (Kuaishou) ကဲ့သို့သော နည်းပညာအဖွဲ့၏ ကျော်ကြားမှုနှင့် သူတို့၏ စွဲမက်ဖွယ်ပေးဆပ်မှုများက သက်သေထူနေသော်လည်း ထိုအလေ့အထကို အကြောင်းပြ၍ အမှုအခင်းအမြောက်အမြားကို ပြသနေသော်လည်း ထိုနှိပ်စက်မှုများကြောင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေသည့်တိုင် သေဆုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ တရုတ်ရဲ့အကြီးဆုံးအွန်လိုင်းလက်လီအရောင်းဆိုင်တစ်ခုမှာ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဟာ အချိန်ပိုအလုပ်ဆင်းချိန် မနက် ၁:၃၀ နာရီမှာ အိမ်အပြန်လမ်းမှာ ရုတ်တရက် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ သူမစိတ္ဆင္းရဲစြာ ေသဆံုးရျခင္းသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လုံးအေပၚ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသည့္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္အေပၚ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ “996 Culture of the Current of the Culture” ႏွင့္ “Big/Little Week of the Children” စသည္တို႔ကို စီစဥ္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။
ဒါေၾကာင့္ အင္တာနက္သံုးစဲြသူေတြက ဒီနည္းပညာကုမၸဏီေတြရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအစပ်ိဳးမႈကို စာနာၿပီး ေထာက္ခံၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ “ ပိတ္ရက္ကေတာ့ သူတို႔အခြင့္အေရးျပည့္တယ္လို႔ ထင္တယ္။ ကျနော်ပြောသလို တပတ်လောက် အနားယူတဲ့ အခါကျမှ တနေ့တာ ပုံမှန်နဲ့ အခွင့်ထူးခံ အသစ်တခု ဖြစ်လာမလား? “ လူတစ်ယောက်က တရုတ်ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ Weibo ပေါ်တက်၍ မေးတယ်” Haha က သူတို့လုပ်နေတာ ကြာပြီ မဟုတ်လား… ဘာလုပ်သင့်လဲ? တနင်္ဂနွေနေ့ အလုပ်ပိတ်ရက် မဟုတ်ပါဘူး! ဘာလို့အရင်းရှင် ဝန်ထမ်းတွေအတွက် သက်သာချောင်ချိမှု ဖြစ်လာရတာလဲ? “ လို့ နောက်တစ်ယောက်က မှတ်ချက်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အားလုံးနီးပါးဟာ တူတဲ့အရာတွေချည်းပဲ မဟုတ်ဘဲ လူတိုင်းက ဒီအပြောင်းအလဲအပေါ် ဝမ်းသာနေကြပါတယ်။ ရိုက်နှက်မှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် ယခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် “Big/Little Week ” ကို ဖျက်သိမ်းမည်ဟု ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် ဝန်ထမ်းအများအပြားက ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင် မကျေနပ်ကြသည့်အတွက် ယခုမူဝါဒသည် အပြောင်းအလဲအတွက် ၎င်းတို့၏ ဝင်ငွေ ဖြတ်တောက်ခံရမည်ကို စိုးရိမ်နေကြသည်။ ပြည်တွင်းစစ်တမ်းတစ်ခုအရ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံနီးပါးက စစ်တမ်းကောက်ယူပြီး “အကြီး/အသေး” ဖျက်သိမ်းရေးကို ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ “ Ah Me Bye Me Do Me!! ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း လစာပေးတယ်ပေါ့နော်!!” ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က Twitter ပေါ်မှာ ညည်းညူပြီး. အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးတဲ့ emoji တစ်ခုကို share ပြီး သူတောင်းစားတစ်ယောက်က ဧရာမအကျီ င်္ကိုကိုင်ပြီး သူတောင်းစားကို ပုံဖော် ပြောတယ် “ ဆိုပြီး ရိုက်နှက် ပြောဆိုလိုက်တာကြောင့် အလုပ်ကဝိုင်းဝန်း ကူညီပေးကြတယ်နော် [မဖျက်ကြပါနဲ့” /The Little Week! “
ေသဆံုးရတဲ့အေၾကာင္းရင္းက “ကရုဏာသက္တဲ့ဆံေကသာကို ငါဘိုက္နဲ႔႐ိုက္ၿပီး လုပ္ရတာ” လို႔ ေရးထားတာေၾကာင့္ပါ
နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီးများအနေဖြင့် တဖြည်းဖြည်း “ကြီးမား/သေးငယ်သော တပတ်” အစီအစဉ်ဖြင့် အချိန်ပို အလုပ်ဆင်းမည်ကို စိုးရိမ်နေကြသော်လည်း အချို့ကမူ “96 ယဉ်ကျေးမှု” ကို ဆက်လက်တည်ရှိနေမည် ဖြစ်ပြီး အခြားသော အားနည်းချက်များ ဆက်လက် ပျံ့နှံ့နေဦးမည် ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှာ လတ်တလော ခေတ်စားနေတဲ့ “ငုတ်တုတ်” ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ် (ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနဲ့ တူတဲ့စိတ်နဲ့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် အလုပ်လုပ်တယ်) ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဥပမာတခုဖြစ်ပြီး တရုတ်လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေက စက်ဆုပ်ရွံရှာတဲ့ နေ့စဉ်အလုပ်တွေကို စည်းချက်ညီညီနဲ့ လုပ်နေကြသလို ပတ်ဝန်း ကျင်မှာလည်း အသံတိတ်ဆန္ဒပြမှုတွေ ရှိတာမို့ ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကို အနစ်နာခံပြီး အလုပ်တွေကို ကြိုးစားလုပ်နေကြရပါတယ်။ တရုတ်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေက “Big/Xiao” အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တာဟာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ လမ်းကြောင်းသစ်တခုပဲလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ ဒါက ပထမအဆင့္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အလုပ်ဝန်းကျင်ကို လုံးဝတိုးတက်အောင် လုပ်ဖို့၊ ပိတ်ရက်ရှည်ကြာစွာ မပျက်မကွက် ထားဖို့အပြင် အပြင်ကနေ ပြန်လာပြီး အလုပ်တွေ ပိုလုပ်ဖို့ လိုပါသေးတယ်။